Kedu otu ngọngọ ga - esi gbanye mmanụ n ’ụlọ ọrụ E-Azụmaahịa | Martech Zone
Dika otu ngbanwe nke e-commerce rutere n'ahịa ahia, di njikere maka mgbanwe ozo na uzo nke teknụzụ blockchain. Ihe ọ sọrọ ya ya bụrụ nsogbu na ụlọ ọrụ e-commerce, blockchain na-ekwe nkwa ịza ọtụtụ n'ime ha ma mee ka azụmaahịa dị mfe maka onye na-ere ahịa yana onye zụrụ ya.
Iji mara otu ngọngọ ga-enwe ezigbo uru na ụlọ ọrụ e-commerce, nke mbụ, ịkwesịrị ịma banyere uru nke teknụzụ blockchain na nsogbu ndị metụtara ụlọ ọrụ e-commerce.
Kedu uru nke teknụzụ blockcheni?
Ihe ngọngọ bụ ebe nchekwa data nchekwa ekesara. A na-echekwa azụmahịa na data ahụ na akpaghị aka na ọnụ onye ahụ.
Azụmahịa ndị a ga-abanye n'ime akwụkwọ ndekọ ma ọ bụ ngọngọ na-akwado ndị otu ahụ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ndi nwere ikike igbanye ahia ndia gha eme ya ka odi mma ma mebie ya.
Ejiri dijitalụ ederede dọkụmentị ka data ahụ wee nwee nchebe.
Mmekọrịta nke blocks na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịgbanwe ọdịnaya nke mgbochi ahụ.
Ndị azụmahịa ma ọ bụ data ahụ na-eji akara akara oge. Ya mere enwere ike nyochaa azụmahịa ahụ na ụbọchị ntinye ya na mbụ.
Nkwekorita amamịghe bụ ebe azụmahịa na-akpalite na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na setịpụrụ ọnọdụ.
Kedu otu ngọngọ ga-esi gbanwee ụlọ ọrụ e-commerce?
Kwụ ụgwọ kwụrụ ọnụ - Processinggwọ nhazi ịkwụ ụgwọ nke ụlọ ọrụ kaadị na ụlọ akụ dị oke elu. Na mgbakwunye na nke a, usoro ntanetị e-commerce na-akwụkwa ụgwọ site n'aka ndị na-ere ahịa maka azụmahịa ọ bụla. Na blockchain technology edoziri iwelata ụgwọ nhazi na ire ọrịre site na ịnye azụmahịa dị ọnụ ala. Standardskpụrụ nchebe ga-adịkwa elu nke mere na onye na-ere ahịa ga-eguzosi ike inweta uru na ya.
Ngwunye Chain Tracking na Ndepụta Ngwaahịa - Inye ngwongwo site na onye na-ere ahia na ikpo okwu e-commerce ma sitekwa ebe ahụ gaa na onye ahịa bụ ọrụ na-agwụ ike iji jikwaa. Ngalaba ụlọ ahịa kwesịrị itule ebuka ndị a ga-abata na ndị a ga-ebuga. Enwere ike nwee nsogbu nke wayo na ngwaahịa ndị dị ala na-eweta. Mana site na teknụzụ blockcheni, ikpo okwu e-commerce nwere ike soro ngagharị nke ngwongwo na-esi na gburugburu ya. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na data edere ederede doro anya, enweghị nkwekọrịta ọ bụla na oke ma ọ bụ mma nwere ike esoro. Nke a ga-abara ndị na-ere ahịa ahịa, ngwa ahịa e-commerce na ndị ahịa ha.
Ndepụta Ngwaahịa - Otu nsogbu dị na azụmaahịa ọ bụla metụtara ngwaahịa bụ nke njikwa ngwaahịa. A ghaghị imejupụta ihe ndị dị na ngwaahịa ahụ ma jikwaa ya. N'ebe a, ngọngọ nwere ike inyere ụlọ ọrụ e-azụmahịa aka na njikwa ngwa ahịa. Site na ịgbakwunye nkwekọrịta smart n'ime blockchain, enwere ike ijikwa ngwongwo ahụ. Enwere ike ịnye ihe ndị ahụ na akpaghị aka site na onye na-ere ahịa mgbe a kara akara njedebe akọwapụtara (njedebe pere mpe). Nke a na-eme ka o doo anya na ụlọ ahịa ahụ enweghị ngwaahịa buru ibu ma ọ bụ na ọ gaghị adị na ngwaahịa.
Nche data - Ihe data anakọtara site na e-azụmahịa nyiwe nọgide na nchekwa data ha. Mana onye ahịa ahụ furu efu ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị a e-commerce jiri data a mee ihe ọtụtụ oge. Ọzọkwa, enwere ike ị nweta usoro niile ma nweta data nchekwa data. Ihe ọmụma dị nro dịka nọmba kaadị akwụmụgwọ na ozi nkeonwe nọ n'ihe egwu. Egwuregwu e-commerce abụghị naanị ịchekwa ozi ndị ahịa kamakwa nke ndị na-ere ahịa ha. Mana site na teknụzụ ngọngọ, data dị na ọnụ ahịa ndị ahịa ọ bụla. Ọ bụ usoro ntanetị na data enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ furu efu.
Ikwesị ntụkwasị obi na ụgwọ ọrụ - Na ngọngọ, ọ na-adị mfe ịgbaso ọnụahịa zuru ezu nke ndị ahịa na ndị na-eguzosi ike n'ihe rụpụtara. A na-echekwa akụkọ ihe mere eme nzụta na isi ihe ndị akwụpụtara na ịgbapụta na nchekwa nke ekesara nke blockchain. A na-akwụghachi ụgwọ ọrụ nke ego na akara akara site na nkwekọrịta amamịghe.
Akwụkwọ ikike na ịzụta nnata - Na nzụta, isi ọwụwa nke ịchekwa kaadị ikike na nnata nnata. Ihe ngbochi ahụ ga - abụ ihe mmụba iji chekwaa nnata zụrụ ka e nwee ike ịnweta ọrụ ikike. The blockchain nwere ike mfe echekwa na soro data otú ikwe ihe àmà nke nke nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Ezigbo Nyocha - Nyocha ndị e mepụtara na ikpo okwu e-commerce dị n'okpuru ọtụtụ ajụjụ. Lọ ahịa e-commerce anaghị emeghe banyere nyocha ndị edepụtara ebe ahụ na ọ nweghị onye ji n'aka ma ọ bụrụ n'ezie. N'ihe nile na-edoghi anya banyere nyocha ndị ahụ, teknụzụ blockcheni na-enyere aka idozi nsogbu nyocha. Ọ na-enyere aka nyochaa nyocha ndị ahụ ma mara ma ọ bụ nke eziokwu na nke eziokwu. Enwere ike ịkpali ndị ahịa ide banyere ngwaahịa ha zụrụ. Gwọ ọrụ, Ọzọkwa, nwere ike site na wallets dijitalụ na blockchain.
Payzọ ịkwụ ụgwọ ọzọ - E-commerce saịtị na-enye ndị ahịa ha usoro ịkwụ ụgwọ dịgasị iche iche dị ka COD, kaadị na obere akpa ego. Mana ọ bụrụ na ewebata cryptocurrency dị ka ọnọdụ ịkwụ ụgwọ, mgbe ahụ ọ na-enye ọtụtụ elele karịa usoro ịkwụ ụgwọ ọdịnala. Ọnọdụ nke ịkwụ ụgwọ bụ ngwa ngwa ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Feesgwọ nhazi ahụ pere mpe. Enweghị egwu nke azụmahịa a gbanwere ma jiri ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi dịka ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ kaadị. Na cryptocurrency, ewepụrụ mkpa maka nkwado nke ndị ọzọ.
Industrylọ ọrụ e-commerce bụ asọmpi dị ukwuu, ụlọ ahịa na e-commerce na-elekwa ụzọ na ụzọ isi nọrọ n'ihu ndị ọgbọ ha. Yabụ, azụmaahịa ga-amata teknụzụ azụmaahịa mara amamịghe iji dịrị mkpa na asọmpi ahụ.
Teknụzụ ngọngọ na-enye usoro ziri ezi iji mee ka ihe dị mfe na ịdị nro. Site na teknụzụ blockchain, ndị niile metụtara ya na ụlọ ọrụ e-commerce ga-erite uru na ogologo oge.
Tags: ọzọ ịkwụ ụgwọblockchaincryptocurrencyNche datae-azụmahịaịkwụ ụgwọ ecommercenjikwa ngwakọiguzosi ike n'iheụzọ ịkwụ ụgwọzụta egoNyochaụgwọ ọrụnjikọ mbunyeakwụkwọ ikike
Ankit Patel bụ onye na-ere ahịa / njikwa ọrụ na Teknụzụ XongoLab na PeppyOcean, nke na-enye ngwanrọ web mmepe na ngwanrọ mmepe mmepe ụwa niile. Dị ka ihe ntụrụndụ, ọ na-ede banyere nkà na ụzụ ọhụrụ na-abịanụ, mmepe mkpanaka, mmepe weebụ, ngwa mmemme, na azụmahịa na imewe weebụ.